Ojiji Smartphone: Ebee Ka Ndị Mmadụ Jiri Smartphones?
Fraịde, Ọktọba 7, 2011 Sunday, October 4, 2015 Adam Obere
Tatango, ụlọ ọrụ na-ere ahịa SMS, apụtawo na infographic ọzọ nke na-ekpughere nke ọma etu ekwentị si banye na ndụ anyị na ihe omume anyị. Ọ dị m ka ya bụrụ na ihe nkiri sịnịma ga-etinye ihe mgbochi mgbaàmà nke ga-eme ka ekwentị ọ bụla ghara ịba uru na ụlọ ihe nkiri. Hapụ ya n’ime ụgbọ ala, ndị mmadụ! Ọfọn!
Kedu ihe ị chere? Ndi ekwentị na - eme ka ndụ anyị dị mfe? Ka ha na-adọpụ uche anyị na ndụ n’ozuzu?
Ndepụta Email: Nzọụkwụ 13 Tupu Click Pịa Ziga!
Ọkt 8, 2011 na 7:30 AM
Pasent site na gịnị? Enwetaghị ọnụ ọgụgụ ahụ
Ọkt 8, 2011 na 3:00 PM
Ọ bụ nyocha nke ndị ọrụ Smartphone na ụlọ ọrụ, Prosper, gburu na September 2011.